Soosaarka Calanka Beerta Ugu Fiican & Warshad | Farshaxanka & Farshaxanka Jesson Flag
Calanka Beerta - Qalabka Qurxinta Wax ku oolka ah
Calanka jardiinada ayaa bixiya xal sanadka oo dhan lagu daro midab, qurux, iyo fariimo muhiim ah banaanka. Isticmaalka calamadan waxay noqon karaan baahiyaha xayeysiinta, laakiin waxay sidoo kale ku deeqi karaan mowduuc madadaalo leh, qaab midab ah, ama si fudud qurxinta goobta. Waxa cad waa in adeegsiga calammada qurxinta ee booskaaga ay ku siin karto muuqaal aad jeceshahay adiga oo aan welwel ka qabin cimilada. Iyagu way sii soconayaan waxayna sii wadaan inay umuuqdaan sanadba sanadka ka dambeeya.
7 Noocyada Dharka ee Loo Heli Karo Ikhtiyaarrada
Kaliya maahan inaan siino dhar caag ah oo caadi ah, sida 130g polyester dhalaalaya oo dhalaalaya, 300D polyester, 100D polyester, 110g polyester tolmo leh iyo 210D oxford, laakiin sidoo kale polyester daabacan oo khaas ah. Dharka labada qaybood leh, calamada laba-geesoodka ah waxay ka dhigan tahay daabicid laba-geesood ah oo ku socota hal lakab
Duplex Polyester daabacan daabacan
Duplex Daabac 100g 100D Polyester
Calanka Bannaanka oo Loo Adeegsado Marar Kala Duwan
Calanka noocan ah ayaa ah midka ugu fiican ee lagu daro ubax ama muuqaal muuqaal ah. Si ka duwan ubaxaaga oo aan sii dheereyn doonin, calamada beerta ayaa sameeya. Waxay ku siin karaan farriin soo dhaweyn ah oo xiiso leh ama kaliya ku dar midab firfircoon aagga. Wax kasta oo ku dhaca xilliyada, way sii ahaanayaan kuwo diiran oo soo dhaweyn leh. Calanka beerta ee la hagaajiyay ayaa loo isticmaali karaa sababo badan awgood. Dhex dhig beer si aad u ogaatid nooca dhirta halkaa ka baxda. Dhig dhowr waddo si aad u abuurto jid qurxin oo qurux badan oo bannaan. U adeegso calaamadaha tilmaamaha. Iyaga dhig waddo ay la socdaan macluumaadka soo booqdayaashu isticmaali karaan.
Heerka 12 "× 18" iyo Calaamadaha Beerta ee Cabbirka La Heli Karo
12 "× 18" waa cabirka caadiga ah ee calamada beerta waxaana loo isticmaali karaa inta badan munaasabadaha. Si kastaba ha noqotee, haddii aad leedahay baahi gaar ah, waxaan sidoo kale kuu habeyn karnaa cabbirka adiga. Ma ubaahantahay adeeg daabacaad caadiya calanka? Dooro CFM oo ku raaxee adeegyada gaarka ah ee gaarka loo leeyahay.
Calanka daabacan ee Custom